फेरी ललितपुर रोडमा हंगामा मच्चाउदै हिडेपछि पूर्वयुवराज पारस प्रहरीको फन्दामा !  Hamrosandesh.com
काठमाडौँ, जेठ ३१ ।
‘पारस भनेर कसरी चिन्ने, सिसा भित्रको चालक? फेरि हामीलाई सबै गाडीको नम्बर पनि थाहा हुन्न। कुनै विदेशी ट्यापे जस्तो लागेको थियो तर पारस रहेछन्,’ हाथेछुले सेतोपाटीसँग भने,‘यदि चिनेकै भए पनि नियम मिच्चे सबैलाई कारबाही हुन्छ।’
‘गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ। हामीले केही समय यता रिङरोड भित्र तिब्र गतिमा सवारी चलाउन रोकेका छौ। यसो गर्दा सवारी दुर्घटनामा २५ प्रतिशत कमि आएको छ,’ हाथेछुले भने,’ सामान्य व्यक्ति मात्र होइन पहुँचवाला व्यक्तिलाई पनि नियम लाग्छ भन्ने यो उदाहरण पनि हो।’ श्रोत सेतो पाटि